गौरव परियार : झट्ट मेरा यि नजर, तिम्रा ति रशिलो वक्षस्थलका ति पिण्ड अनि नितम्ब तिर गइहाल्छन् ।
मनै मन तिम्रा ती वस्त्र विहिन शरीर सँग विशाल प्यास काे साथमा आफुलाई तिम्रा ति कमलो मासु सँग खेलिदिन्छन।
यो मनले ,तिम्रा ति वस्त्र रहित निउड मा बेजोडले रुचि राखी दिन्छन्। नयन ले नी पूर्ण रुपमा तिमी सँग का ति प्रत्येक यौबन का अंग का साथमा काउकुती लगाइदिन्छन् । चाल, फिगर अनि उनका ती हिडाई का गति ले व्याकुल पारिदिन्छन्।
नशालु भाव मा तिम्रा वोठ तिर यी मन गाजिदिन्छन । तुच्छता पूर्ण पुरुषार्थ काे रूप देखाई दिन्छन् , आफु सँग ति भीड मा आफुलाई नै झुट को खेती गरिदिन्छन् । पराई का छोरी बहिनी,यो मन मस्तिष्क मा रस झैं घुली दिन्छन् ।
लेखक :गौरव परियार
राम्रो संग भुइँ छोड्न पाको छैन ,कुन ठाउँ मा रस छन् छैनन , त्यसको पता नि यही समाज ले गराइदिन्छन् । आफूले आफैलाई त्यो भीड मा दानव बनाइदिन्छन्।
दुई चार सृष्टाचार का भाव ले यी पाइला रोकिदिन्छन। अनि जब ति सृष्टचार, भाव का थान हराउन पुग्छु। तब त्यो बलात्कारी समाज को एक हिस्सा बनिदिन्छु।
हाल ट्रेन्ड मा चलेको यो बन्मानुश, दानवी हर्कत फरक लिङ्ग का दुई समाज क्याजुअल बात गर्दा, हिँड्दा बाहिरी दुनियाँ मा घुलिदा यस्ता हर्कत हुन सक्छन। यस्ता भावहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।
यसलाई अहिले काे हाम्रो समाज मा, दुई लिङ्ग बीच हुने स्वाभाविक कारण बताइन्छ ।
कुरा यो होइन कि फरक लिङ्ग का बीच कुनै हेराईअनि दृष्टि नहोस् ।
कुरा यो होकी उनि उ सँग रहँदा कति काे सुरक्षित महसुस गर्छिन्। उसको हेराई अगर असहज पुर्ण भयो भने उनि आफ्नो व्यक्तिगत रूप मा बस्न सक्छिन् की नाई!
भन्ने कुरा मूल हुन जान्छ ।
हेराई अनि दृष्टि फरक फरक पनि हुन सक्छन।
हेराईदृष्टि जिज्ञाशा मा आधारित छ भने त्यसलाइ सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यो दृष्टि मा हामी एकआपस बाट धेरै कुरा को जानकारी बटुल्न सक्छौ। यो मित्रवत दृष्टि हो। यो दृष्टि बाट राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सक्छ ।
तर त्यहाँ वासनाको लहर छ भने त्यो नराम्रो दृष्टि हो। त्याहाँ कामुकताको भन्डा फोर युद्धको सृजना हुन सक्छं ।
त्यसलाई हटाउन मन का दोशपूर्ण भाव लाई चिरफार गर्नु पर्छ । आफूमा के हि समय खर्च गरी मनको विचार बारे सोच्न जरूरीहुन सक्छं ।
म कुन रूप मा यो समाज मा स्थापित छू ?
मानव या दानव त्यसका विकल्प के हुन सक्छन् ? आखीर हाम्रा यि नजरहरुले उनका उठेका वक्षस्थल अनि नितम्वमा मात्रै किन रस देख्छन् ।
उनका हात खुट्टा अनि अनुहारका मासु मा किन देख्दैनन् ? किन, ती यौनिक मासु मा रस पैदा गरिदिन्छन्। ?
उनीसँग रहँदा यस्तो , होस् कि बाशना का नजर भन्दा पर काे दृष्टि पैदा भइरहेको होस्। उनलाई आफ्ना अङ्ग प्रती काे कुनै असहजता उत्पन्न नहोस् ।
तब भन्न सकिन्छं अब को नयाँ युग को समाज, जो सँग महिला पुरुष बिच शारीरिक यौनिक विचार मा डुब्ने कुनै खालको विचार नै हुदैन । र कडाइ गरी फुटकर शिष्टाचार ले आफूमा बाँध्न पर्दैन । एउटै रूप काे ,धारणाले देख्न सकिन्छ।